Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska Reiss Nelson Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh nololeed ee Untold
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee loo yaqaan 'Genius Football' kaasoo si fiican loogu yaqaan magaca "Tilmaanta". Sheekadeena 'Reiss Nelson Childhood Story' iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold wuxuu kuu keenayaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa caruurnimada ilaa taariikhda.
Nolosha iyo Sareynta Reiss Nelson. Dhibcaha SkySports iyo Arsenal FC
Falanqaynta waxay ku lug leedahay noloshiisii ​​hore & qoyskiisii, waxbarashadii & dhismihii xirfadiisa, noloshiisii ​​hore, sheekadii noloshiisa kahor, ubax sheekooyinka, xiriirka, nolosha shaqsiyadeed, xaqiiqooyinka qoyskiisa iyo qaab nololeedkiisa iwm.
Haa, qof walba wuu ogyahay inuu ka mid yahay da 'yartaas xiisaha badan ee ka soo baxay akadeemiga Arsenal. Si kastaba ha noqotee, in yar ayaa tixgeliya taariikh nololeedkii Reiss Nelson oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Reiss Nelson Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh nololeed aan la qorin - Hore iyo Taariikhda Qoyska
Laga bilaabo, Magacyadiisa oo dhammaystiran waa Reiss Luke Nelson. Reiss Nelson wuxuu ku dhashay maalintii 10th ee Diseembar 1999 waalidkiis- aabihiis reer Zimbabwe ah iyo hooyo Ingriis ah oo ku taal agagaarka London ee Elephant iyo Castle, England.
Reiss Nelson kama soo korin asal qoys qani ah. Sidoo kale, isagu ma ahayn caruur caynkaas ah oo waalidkood awood u siinayeen inuu aruuriyo waxyaabaha cusub ee alaabada lagu ciyaaro marka laga reebo kubad.
Reiss Nelson wuxuu ku koray dhinac waalidkiis iyo walaalkiis odayga ah ee Aylesbury Estate. Dhismaha Dhismaha hoose ee sawirka hoose waa adduunyo ka fog (gebi ahaanba ka duwan) degmooyinka dhaqaale ee soo koraya ee xukuma dariiqa London.
Tani waa Aylesbury Estate halkaasoo Reiss Nelson uu ku koray. Dhibcaha SkySports
Reiss Nelson Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh nololeed aan la qorin - Dhismaha Waxbarashada iyo Xirfadaha Shaqada
Si looga hortago dhibaatooyinka tuugada iyo dambiyada mindida, waalidiinta Reiss waxay go'aansadeen inay wiilkooda u diraan Iskuulka Nautical London ee u dhow Waterloo. Horaantii, weligeed shaki badan kama qabin in Nelson uu ku socday jihada saxda ah. Wuxuu ahaa wiil caqli badan oo la shaqeyn kara aqoonyahanno badan isla markaana ciyaari kara kubbada cagta saacadaha iskuulka kadib.
Illaa iyo intii ka dambeysay howlaha iskuulka kadib, Reiss ma uusan dhameystirneyn isagoon saaxiibkiis ugu fiican kubad la ciyaarin. Saaxiibkaa ugu wanaagsanaa ma ahayn qof aan ahayn Jadon Sancho- Oh Haa, waad maqashay taas !. Sancho kaas oo waalidkood ku noolaayeen Dhismaha Guinness Trust ee u dhow Kennington Park ayaa saaxiib wanaagsan u ahaa ilaa caruurnimadoodii.
Ma ogeyd?… Reiss Nelson iyo saaxiibkiis dhow waxay ahaayeen kuwa saaran garsoorayaasha kubada cagta ee la taaban karo Sancho xirfadahooda wiilasha ayey ku dhaari jireen. Horumarkaani wuxuu arkay iyaga oo lagu casuumay Tartanka carruurta Koonfurta London.
Labada Reiss Nelson iyo Jadon Sancho waxay ahaayeen saaxiibbada ugu wanaagsan ee Carruurnimada. Dhibcaha SkySports
Sida laga soo xigtay SkySports. Habeenkii deyrta qabow ee koonfurta London, labada wiil (Sancho iyo Reiss Nelson) waxay ku ciyaareen tartanka si la yaabka ah taageerayaasha. Holmes-Lewis, oo ah tababare kubada cagta ah iyo lataliye ayaa mar qirtay waxa uu arkay;
"Markii aan garoonka soo galay, waxaan arkay wiilkan oo ku siibayaya 30-yaard ka dibna u gudbaya meel kale oo wiil kale ah (Jadon Sancho) kaas oo markaa si toos ah isaga ugu soo celiyay isaga. Markii aan ka jawaab celinayay, waxaan si dhaqso ah u qabtay labadayda tababaradood, Cedric [Kobongo] iyo Ahmet [Akdaj], oo waxaan ku idhi 'miyaad aragtay fahanka telepathic-kan? Taasi waxay ahayd waalan !!"
Reiss Nelson iyo Jadon Sancho ayaa labadoodaba ka caawiyay kooxdooda inay ku guuleystaan ​​tartanka, waana ciyaar farxad gelisay Holmes-Lewis.
Reiss iyo Sancho ee Tartanka Ciyaaraha Caruurta ee London Southwark. Dhibcaha SkySports
Reiss Nelson Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh nololeed aan la qorin - Nolosha Mudnaanta Hore
Inaad ku guuleysato kubbadda cagta maxalliga ah waxay heshay Reiss Nelson taleefanka Moonshot, oo ah akadeemiyadda dhallinyarada maxalliga ah ee aaggiisa. Intii uu halkaas joogay, waxaa qiimeeyay Tottenham. Reiss ayaa joogay Tottenham muddo bil ah ka hor intaanu soo bixin wicitaan aan laga fiirsanin oo ka imaanaysa Arsenal. Saaxiibkiisii ​​ugu fiicnaa Sancho sidoo kale wuxuu ka soo wacay Watford.
Jacaylka labadaba Reiss iyo Sancho waxay u arkeen kubada cagta iyaga oo arkay sanadka 2007, iyagoo gudbaya tijaabooyin isla markaana la galinaya barnaamijka akadeemiyadeed ee Arsenal iyo Watford siday u kala horreeyaan. Bilaabistiisa noloshiisa akadeemiyadda kuma fududaan Reiss. Waqtigaas, wuxuu hore u toosi lahaa si uu tareenka ugu aado Catford oo uu weheliyo walaalkiis ka weyn. Taas ayuu sameeyey saddex jeer usbuucii.
Meel aan fogeynin ama waqti lumis ma yarayn karto xiriirka ka dhexeeya Reiss iyo Sancho. Kaliya waxay ku qaadatay daqiiqado 38 tareenka iyo daqiiqadaha 52 baabuur labada wiil inay midba midka kale arko. Da'da 14, qiyaastii Maarso 2015, Jadon Sancho u dhaqaaqay Manchester City. Reiss Nelson wuxuu sii waday inuu horumar la sameeyo Arsenal isaga si dhaqso leh ayey kor ugu soo kacday.
Reiss Nelson Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh nololeed aan la qorin - Waddada loogu talagalay sheekada
Isagoo la soo shaqeeyay darajooyinka akadeemiyadda, Reiss waxaa lagu siiyay qandaraaskiisii ​​ugu horreeyay ee xirfadda Arsene Wenger dhalashadiisa 17th dhalashadiisa. Si ay u helaan waqti ciyaar, Reiss wuxuu qaatay go'aan muhiim ah oo ku saabsan shaqada. Jadon Sancho kaasoo horey ugu soo tagay kooxda Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka ayaa kula taliyay saaxiibkiis Reiss inuu ku soo biiro Horyaalka Jarmalka.
Reiss Nelson wuxuu go’aansaday inuu raaco wadadii asxaabtiisa ugu fiicnaa isagoo amaah ugu safraya si uu ula ciyaaro 1899 Hoffenheim, oo ah koox Jarmal ah qeybta koowaad ee Jarmalka. Sida Borussia Dortmund oo kale Jadon Sancho, Hoffenheim wuxuu sidoo kale siiyay Reiss Nelson madal lagu muujiyo hibadiisa.
Reiss Nelson ayaa mar loo dabaaldegay sidii gooldhaliyaha ugu sareeya ee Ingiriisiga iyada oo loo marayo Yurub iyada oo goolasha 6 laga dhaliyay kulamadii 7, isaga oo celcelis ahaan celcelis ahaan celcelis ahaan celcelis ahaan celcelis ahaan celcelis ahaan celcelis ahaan celcelis ahaan. Sida hoos lagu arkay, xitaa ma aha Raheem Sterling xitaa Harry Kane taas oo garaaci kara taas.
Rees Nelson Wadada sheekada Fanka. Ku mahadsanid Standard
Reiss Nelson Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh nololeed aan la qorin - Kusoo sharax sheekada
Saamaynta Nelson ee Hoffenheim waxay ku kasbatay inuu u dallaco England U21s. Waxay sidoo kale soo kicisay Unai Emery si loogu yeero xasuusta hore ee da 'yarta. Astaamahaa uu lahaa - is aaminaadda, heerka shaqada iyo go’aaminta - taas oo ka muuqatay Hoffenheim haatan si fiican ayey ugula shaqeeyeen Arsenal.
Rees Nelson Rise Sheekada Fanka. Dhibcaha SkySports
Reiss Nelson oo noqday cayaaryahanka 844aad ee matalaya kooxda koowaad ee Arsenal ayaa leh Shaki la'aan wuxuu u cadeeyay taageerayaasha inuu yahay yabooha xiga ee quruxda badan ee jiilka Ingriiska. Inta soo hartay, sida ay yiraahdeen, hadda waa taariikh.
Reiss Nelson Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh nololeed aan la qorin - Nolosha Xiriirka
Isaga oo caan ku noqday caannimada, waxaa suurta gal ah in qaar ka mid ah taageerayaasha Arsenal ay aheyd inay ka fekeraan xaaladdiisa xiriirka su'aashan; 'Waa kuma gabadha Reiss Nelson?'. Haa !, Ma beenineyso xaqiiqda ah in muuqaalkiisa qurxoon uu la mid yahay qaabkiisa ciyaarta uusan u suuragelin doonin inuu soo jiito taageerayaasha akọlele.
Waa kuma Gabadha Reiss Nelson. Amaahda IG
Sida wakhtigii qorista, Reiss Nelson wali waa kaligiis oo umuuqda mid diirada saaraya mustaqbalkiisa. Isagoo ka fiirsanaya qaab nololeedkiisa haatan ee garoonka, waxay umuuqataa Reiss inuu yahay u diyaar garoobaya. Anigat waxaa macquul ah inuu lahaado gabar saaxiibo ah laakiin wuxuu diiday inuu xiriir la yeesho dadkeeda, ugu yaraan hadda.
Reiss Nelson Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh nololeed aan la qorin - Naftaada Shaqsiga
Inaad barato nolosha Reiss Nelson shaqsiyanka waxay kaa caawin doontaa inaad sawir wanaagsan ka hesho shakhsigiisa. Laga soo bilaabo, waa nin qabow oo jecel inuu muujiyo is-hoosaysiin iyo caannimada magaca kubada cagta casriga ah.
Ogaanshaha Reiss Nelson Nolosha Qofka. Amaahda IG
Reiss Nelson waa qof awood u leh inuu fikradihiisa u beddelo ficil la taaban karo oo ku dhaqaaqi doona wax kasta oo bini-aadam ah intii suurtagal ah si loo gaaro himilooyinkiisa.
Reiss Nelson Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh nololeed aan la qorin - Nolosha Qoyska
Reiss Nelson, in kasta oo ku dhashay Ingriiska wali wuu qaddariyo xididdadiisa Zimbabwe. Laga soo bilaabo waxay umuuqataa, aabihiis, hooyadiis iyo walaalkiis ka weyn Dhammaantood waxay sameeyeen xulasho xasaasi ah oo ah inaadan raadsan aqoonsi dadweyne.
Reiss Nelson aabihiis: In yar ayaa laga ogyahay aabihiis reer Zimbabwe, xitaa magaciisa ma ahan. Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay mareegta Arsenal, Reiss wuxuu mar siinayaa aabihiis xoogaa dhibco ah oo uu kaga sii dhigo garoonka.
Reiss Nelson hooyadeed: Isagoo ka tarjumaya maalmihii carruurnimadiisa, mid ka mid ah xusuusta ugu wanaagsan ee Reiss ayaa ah tan ku saabsan hooyadiis. Waa daqiiqada ay si adag ugu shaqeyn laheyd inay iibsato Therry Henry's maaliyad uu xirto maalin walba dugsiga, xafladaha iyo ciyaarta garoonka dhexdiisa. Hoos waxaa ku yaal sawirka hooyada iyo wiilkaba iyagoo leh dhidib aan caadi aheyn.
Reiss Nelson ayaa hooyaday. Amaahda IG
Reiss Nelson walaalahaaga: Sida laga soo xigtay Websaydhka Arsenal, Reiss Nelson walaalkiis ka weyn ayaa lagu qiimeeyaa inuu ka tanaasulay noloshiisii ​​bulsheed si uu uga caawiyo walaalkiis ka yar si uu u gaaro riyadiisa. Walaalkiis ka weyn oo aan wali magaciisa la sheegin (magac-la-aqoon) ayaa ku huray wax badan si uu u helo Reiss halka uu maanta joogo.
Markuu Reiss u aado xafladaha habeenka jimcaha, walaalkiis ka weyn wuxuu hubin lahaa inuu nasiino ku filan helo ka hor bilowga usbuuca. Walaalkiis ka weyn ayaa sidoo kale geyn lahaa kana soo qaadaya garoonka tababarka muxaadarooyin akadeemiyadeed, xilli dambe iyo bilawgaba.
Reiss Nelson Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh nololeed aan la qorin - LifeStyle
Reiss Nelson waa nin jecel-jecel oo jecel inuu wax sameeyo, kharashkiisa ku bixiyo oo noloshiisa ku noolaada si buuxda. Mararka qaar wuxuu doorbidayaa in lagu fuulo diyaarado cirka lagu tuurayo mawjadaha badda halkii uu gaarigiisa ku haysan lahaa waddooyinka. Tani waxay soo koobeysaa qaab nololeedkiisii ​​u gaarka ahaa.
Xaqiiqooyinka Nolol ee Rees Nelson. Amaahda IG
Reiss Nelson Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Taariikh nololeed aan la qorin - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Asxaabtiisa Ugu Fiican: Gargaare Jadon Sancho, Reiss wuxuu leeyahay laba ka mid ah saaxiibadiisa ugu wanaagsan ee Eddie iyo Joe. Dhamaan wiilasha waxay soo mareen safka hore ee akadeemiyada Arsenal iyagoo ku guuleystey xirfadahooda.
Barashada saaxiibbada ugu wanaagsan ee Reiss Nelson. Eddie (bidix) iyo Joe (Midig).
Fiqi: Reiss Nelson magaca dhexe “Luke"Soo jeedi inuu isagu Masiixi yahay diinta isla mar ahaantaana u janjeedha caqiidada katooliga. 'Luke"wuxuu ahaa qoraaga Falimaha Rasuullada waana magaca saddexaad ee Injiilka ee Axdiga Cusub.
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay aqrintayada Reiss Nelson Childhood Story iyo Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya hoos. Had iyo jeer waanu qiimeynna oo ixtiraamnaa fikradahaaga.
Jadon Sancho Story Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano Weriyeyaasha